ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲမှာ ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်ကစားသမားများ
13 Jul 2018 . 12:26 PM
ခရိုအေးရှားကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲမှာ အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေ Cheat လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာကို ပရိသတ်တွေ သတိထားမိရဲ့လား။ မိနစ်(၉၀)သရေကျနေလို့ အချိန်ပို ဆက်ကစားခဲ့ပြီး (၁၀၉)မိနစ်အရောက်မှာ ခရိုအေးရှားတိုက်စစ်မှူး မန်ဇူကစ် Mandžukić က အင်္ဂလန်တို့ကို အသည်းခွဲဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ ပွဲပြီးဖို့ကလည်း မိနစ်ပိုင်းလောက်သာ လိုတော့တာကြောင့် အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေဟာ ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းတော့တာပါပဲ။
အဲဒါက ခရိုအေးရှားကစားသမားတွေ ဂိုးသွင်းအပြီး အောင်ပွဲခံနေချိန်မှာ အင်္ဂလန်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rashford နဲ့ လင်ဂတ် Lingard တို့ဟာ စပေးဘောကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ပြီး ပြိုင်ဘက်ကို ဂိုးသွင်းဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာပါ။
အဲဒီအချိန်မှာ ခရိုအေးရှားကစားသမားတွေက အင်္ဂလန်ဂိုးဘက်ခြမ်းမှာ အကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံနေကြပြီး ရုပ်သံတွေကလည်း အဲဒီအောင်ပွဲခံပုံကိုပဲ ဖော်ပြနေတာကြောင့် ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ လင်ဂတ်တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရုပ်သံကြည့်ပရိသတ်တွေ မမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကွင်းထဲက ပရိသတ်တွေကတော့ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့လင်ဂတ်တို့ရဲ့ ဟာသဆန်ဆန် လုပ်ရပ်ကို ဖုန်းကင်မရာတွေနဲ့ ရိုက်ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ လှောင်ပြောင်ဖော်ပြခဲ့ရာက မီဒီယာတွေပါ သတိပြုမိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့ လင်ဂတ်တို့က ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးက ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ပွဲလည်းရှုံး၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ “မိအေး နှစ်ခါနာ”ဆိုသလို ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ . . .
Photo:Daily Mail Naing Linn(Akhayar)
ခရိုအေးရှားနဲ့ပှဲမှာ ဥပဒကေို လကျတဈလုံးခွားလုပျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျကစားသမားမြား
ခရိုအေးရှားကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုငျနယျပှဲမှာ အင်ျဂလနျကစားသမားတှေ Cheat လုပျဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့တာကို ပရိသတျတှေ သတိထားမိရဲ့လား။ မိနဈ(၉၀)သရကေနြလေို့ အခြိနျပို ဆကျကစားခဲ့ပွီး (၁၀၉)မိနဈအရောကျမှာ ခရိုအေးရှားတိုကျစဈမှူး မနျဇူကဈ Mandžukić က အင်ျဂလနျတို့ကို အသညျးခှဲဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။ ပှဲပွီးဖို့ကလညျး မိနဈပိုငျးလောကျသာ လိုတော့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျကစားသမားတှဟော ဥပဒကေို လကျတဈလုံးခွားလုပျဖို့ ကွိုးပမျးတော့တာပါပဲ။
အဲဒါက ခရိုအေးရှားကစားသမားတှေ ဂိုးသှငျးအပွီး အောငျပှဲခံနခြေိနျမှာ အင်ျဂလနျကစားသမားနှဈဦးဖွဈတဲ့ ရပျရျှဖို့ဒျ Rashford နဲ့ လငျဂတျ Lingard တို့ဟာ စပေးဘောကို မွနျမွနျဆနျဆနျတညျပွီး ပွိုငျဘကျကို ဂိုးသှငျးဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့တာပါ။
အဲဒီအခြိနျမှာ ခရိုအေးရှားကစားသမားတှကေ အင်ျဂလနျဂိုးဘကျခွမျးမှာ အကွီးအကယျြအောငျပှဲခံနကွေပွီး ရုပျသံတှကေလညျး အဲဒီအောငျပှဲခံပုံကိုပဲ ဖျောပွနတောကွောငျ့ ရပျရျှဖို့ဒျနဲ့ လငျဂတျတို့ရဲ့ လုပျရပျကို ရုပျသံကွညျ့ပရိသတျတှေ မမွငျတှခေဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကှငျးထဲက ပရိသတျတှကေတော့ ရပျရျှဖို့ဒျနဲ့လငျဂတျတို့ရဲ့ ဟာသဆနျဆနျ လုပျရပျကို ဖုနျးကငျမရာတှနေဲ့ ရိုကျပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော လှောငျပွောငျဖျောပွခဲ့ရာက မီဒီယာတှပေါ သတိပွုမိခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ ရပျရျှဖို့ဒျနဲ့ လငျဂတျတို့က ဥပဒကေို လကျတဈလုံးခွားလုပျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ကှငျးလယျဒိုငျလူကွီးက ခှငျ့မပွုခဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ အရှကျရစရာဖွဈခဲ့ရတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ပှဲလညျးရှုံး၊ ပရိသတျတှရေဲ့ လှောငျပွောငျမှုနဲ့လညျး ရငျဆိုငျခဲ့ရလို့ “မိအေး နှဈခါနာ”ဆိုသလို ဖွဈခဲ့ရတာပါ . . .